State Counsellor receives Chinese People’s Political Consultative Conference – Ministry of Foreign Affairs
State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi receivedadelegation led by Mr. Edmund Ho Hau Wah, Vice-Chairman of the Chinese People’s Political Consultative Conference and former Chief Executive of the Macau Special Administrative Region, at the Presidential Palace Hall for Envoys in Nay Pyi Taw on 29 March morning.
During the meeting, they discussed matters related to education, rural region development, travel, movies, investment, trade and cooperation.
Also present at the meeting, along with the State Counsellor, were Union Ministers Dr. Than Myint, U Ohn Maung and U Kyaw Tin; Deputy Minister U Set Aung and other officials, while Chinese Ambassador to Myanmar Hong Liang accompanied the Vice-Chairman of the Chinese People’s Political Consultative Conference.
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တရုတ်ပြည်သူ့ နိုင်ငံရေး အတိုင်ပင်ခံ ကွန်ဖရင့် အမျိုးသားကော်မတီ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အားလက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် တရုတ်ပြည်သူ့နိုင်ငံရေး အတိုင်ပင်ခံကွန်ဖရင့် အမျိုးသားကော်မတီ၏ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ မကာအို အထူးကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်း Mr. Edmund Ho Hau Wah ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား မတ်လ ၂၉ ရက်နေ့၊ နံနက် ၁၀ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံတော်သမ္မတအိမ်တော် သံတမန်ဆောင်ဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
တွေ့ဆုံစဉ် ပညာရေး၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်း၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုန်သွယ်ရေး ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ အပါအဝင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
တွေ့ဆုံပွဲသို့ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့်အတူ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာသန်းမြင့်၊ ဦးအုန်းမောင်နှင့် ဦးကျော်တင်၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးဆက်အောင်နှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြပြီး တရုတ်ပြည်သူ့နိုင်ငံရေး အတိုင်ပင်ခံကွန်ဖရင့် ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်သံအမတ်ကြီး မစ္စတာဟုန်လျန်လည်း တက်ရောက်သည်။